Ukulimala Kwezokunakekelwa Kwamalanga | Izinkampani Zomthetho eDubai
Okwamanje lapho unikeza ingane yakho ngaphansi kweso elibhekele ukunakekelwa kwasemini noma esikoleni, kungokwemvelo nje ukuthi ulindele ukuthi ingane yakho encane izovikeleka futhi izwakale ngesikhathi ihlala kuleso sikhungo.
Ukulimala kokunakekelwa kwasemini kungenzeka noma nini.
Abasebenzi abanakekela izingane zasemini bangazenzela budedengu
Ama-Daycares kulindeleke ukuthi abe nezintshisakalo ezinhle zengane ukuze anciphise ubungozi angabhekana nabo futhi baphathe lesi simo sengathi izingane zingezabo. Kuyadabukisa ukuthi lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi.
Ummeli okhethekile wokulimala kokunakekelwa kwasemini uzokusiza
Ukulimala kokunakekelwa kwasemini kungenzeka noma nini. Abongi abasemini noma abasebenzi besikole nabasebenzi bangenza budedengu futhi benze amaphutha futhi lokhu kuvame ukuholela ekulimaleni. Kepha, ungazizwa ungasizi ngalutho uma ingane yakho ihileleka engozini yokunakekelwa kwasemini. Ummeli okhethekile wokulimala kokunakekelwa kwasemini uzokusiza ekutholeni isinxephezelo esifanele sokulimala kwengane yakho futhi uqinisekise ukuthi inkinga efanayo ngeke iphinde yenzeke.
Kunezindlela eziningi zokwephula noma ukwephula izinga lokunakekelwa. Izisebenzi zinganakekeli imisebenzi yangaphandle nangaphakathi. Izikhungo noma abaqhubi bazo kanye nabanikazi bazo bangaphula umsebenzi wabo wokunakekela uma behluleka ukugcina kahle imishini yokudlala, indawo yokusebenzela, kanye nemishini yasekilasini; behluleka ukuhlinzeka ngendawo yokuhlanzeka nokuhlanzekile; noma bavumela izingane ukufinyelela izinto ezithumela ukujaha ukulimala ubungozi.
Izikhungo zokunakekelwa kwasemini ezihlinzeka ngezinto zokuhamba nazo zingaba budedengu ekwehlulekeni kokubheka abashayeli, ukuqasha abashayeli abanganele, ukwehluleka ukunakekela kahle nokuhlola izimoto, nokuhluleka ukwenza isiqiniseko sokuthi izingane zingeniswe kahle futhi zihleli.
Izenzo Ezingalungile Zokulimala Kwasemini
Uma ingane yakho ihlushwa ukulimala esikhungweni sokunakekelwa kwasemini noma esikoleni ngenxa yabasebenzi abanganaki, ungaletha isenzo sokunganaki ukukusiza ekutholeni ukulimala kokulimala okuqhubekayo kwengane yakho. Uma imvelo yalesi sikhungo yakhelwe ngokungakhathali noma ihlelwe ngendlela engaba yingozi ezinganeni, umnikazi wesikhungo noma umuntu oqashiwe ngumnikazi ukuba aseke isikhungo ubhekene nesibopho sokunganaki kokulimala okukhona kwengane .
Ukuqonda Imithetho Yokuhlukunyezwa Kwezingane Nokunganakwa
Uma ingane yakho ilimala ngenkathi igadwe yigogo, isikhungo sokunakekela izingane, noma omunye umuntu obhekele ukuyinakekela, ungathumela icala lokuqapha budedengu. Ezimweni ezinjalo, umuntu owemukele umthwalo wemfanelo wengane yakho kodwa enze ngokungakhathali noma ngokunganaki angafakwa icala lokunganaki.
Udinga ubufakazi bokuthi inhlangano noma umuntu wemukele isibopho sokunakekela ingane yakho ukufakazela icala lokuqondisa budedengu. Udinga futhi ukufakazela ukwehluleka komnakekeli ukuqapha ingane yakho kahle. Kufanele ukhombise ukuthi ukulimala kwengane yakho bekungavikeleka futhi kubonakale kusengaphambili futhi ukwehluleka kumphathi ukuqapha kahle ingane yakho kubangele ukulimala.
Kunamacala wokuhlukumeza ngokweqile kwezingane ngenkathi engaphansi kokunakekela iqembu elibhekele kubandakanya nokushaya nokushaya. Lawa ngamacala abhubhisayo futhi athusayo ezinganeni nakubazali futhi kubalulekile ukuthi kuphishekele ubulungiswa ngenkuthalo enkantolo yezomthetho ukuze bathweswe icala ngomonakalo.
Xhumana Nommeli Wokulimala Kwezingane
Thintana nommeli wokulimala kwengane khona lapho ukuze uthole abamele abazinikele, abanokhahlo nabanolwazi abazonilwela nina namalungelo engane yenu bese nithola isinxephezelo esigcwele.
ukunganakwa esikhungweni sokunakekela izingane
Abameli bethu baneminyaka engaphezu kwengama-35 banolwazi ngamacala budedengu nokunakekelwa kwasemini futhi balapha ukusiza.